Mkpa nke Oort Cloud. The njedebe nke usoro mbara igwe | Network Meteorology
Oort Cloud. Oke ala nke Igwe
Akara 1 na meanswa pụtara 1 Astronomical Unit (AU), nke bụ ụzọ si towa ruo Anyanwụ. Ihe atụ Saturn, 10 AU = ugboro 10 anya n'etiti Earth na Sun
The Oort Cloud, nke a makwaara dị ka «ikpik-Oort ígwé ojii», bụ ígwé ojii na-atụ ụjọ nke ihe trans-Neptunian. Enweghị ike ịhụ ya ozugbo. Ọ dị na nsọtụ usoro mbara igwe anyị. Na otu nha nke afọ 1, ọ bụ nkeji iri na ise nke ụzọ site na kpakpando anyị kacha nso na sistemu anyanwụ anyị, Proxima Centauri. Iji nweta echiche nke oke ya n'ihe gbasara Anyanwụ, anyị ga-akọwapụta ụfọdụ data.
Anyị nwere Mercury, Venus, Earth na Mars, n’usoro a, gbasara Sun.Ọ na-ewe 8 nkeji na 19 sekọnd maka ụzarị nke Sun iji ruo n’elu ụwa. Na-agafe, n’etiti Mars na Jupita, anyị ga-ahụ eriri asteroid. Mgbe eriri a gasị, bịa na ndị dike 4, Jupiter, Saturn, Uranus na Neptune. Neptune dị ihe dịka ugboro 30 site na Sun ruo ụwa. Ìhè anyanwụ na-ewe ihe dịka elekere 4 na nkeji 15 iji rute. Ọ bụrụ na anyị echebara ụwa anyị echiche nke kacha dị anya na Anyanwụ, njedebe nke Oort Cloud ga-abụ ugboro 2.060 dị anya site na Sun ruo Neptune.
1 Ebee ka o si dị adị?
2 Kedu ihe dịnụ na Oort Cloud gụnyere?
3 Mmetụta Tidal na Oort Cloud na ụwa
4 Usoro nke ikpochapu umu anumanu na mbara ala anyi
5 Usoro ozo
Ebee ka o si dị adị?
Na 1932, onye na-enyocha mbara igwe bụ Erns Öpik, ọ kwuputara na comets ndị na-agagharị ruo ogologo oge sitere na igwe ojii buru ibu karịa akụkụ nke usoro mbara igwe. Na 1950 onye nyocha mbara igwe bụ Jan Oort, jiri aka ya wepụta usoro mmụta nke na-eweta ihe mgbagwoju anya. Jan Oort kwenyesiri ike na meteorites enweghi ike imebe na uzo ha ugbu a, n'ihi ihe di egwu nke na-achi ha, ya mere o mesiri obi ike na oghago ha na ha nile aghaghi idobe ha n'ime igwe ojii buru ibu. Maka ndị na-enyocha mbara igwe abụọ a, igwe ojii a nwere aha ya.
Oort nyochara n’etiti ụdị abụọ comets. Ndị nwere orbit nke na-erughị 10AU na ndị nwere ogologo oge (ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ isotropic), nke karịrị 1.000AU, ọbụnadị ruru 20.000. Ọ hụkwara, ka ha si si n’okwute niile. Nke a nyere ya ohere ịchọpụta na, ọ bụrụ na ha si n'akụkụ niile na-abịa, igwe ojii a na-eche n'echiche ga-enwe ọdịdị dị gburugburu.
Kedu ihe dịnụ na Oort Cloud gụnyere?
Dị ka nkwupụta nke mmalite nke Oort Cloud, dị n'usoro usoro mbara igwe anyị, na nnukwu nkwekọrịta ndị dị adị na ihe ndị a na-agbapụ. Ihe ndị mepụtara ya bụ kpakpando nke Anyanwụ na mmalite ya. Agbanyeghị, ike ndọda nke nnukwu mbara ala ndị ahụ megharịkwara gburugburu ha, na-eziga ha n'ebe dị anya ebe ha nọ.
Komp na-agba gburugburu, mmegharị site n'aka NASA
N'ime igwe ojii Oort, anyị nwere ike ịiche ụzọ abụọ:
Esịtidem / Ime ụlọ Oort Cloud: Ọ bụ nke gravitationally metụtara Sun. A na-akpọkwa Hills Cloud, ọ dị ka diski. Ọ dị n'etiti 2.000 na 20.000 AU.
Oort Cloud Mpụga: Ọdịdị nke ọdịdị ala, nke metụtara kpakpando ndị ọzọ na ebili mmiri nke galactic, nke na-agbanwe gburugburu nke mbara ala, na-eme ha okirikiri. Ngwurugwu n'etiti 20.000 na 50.000 AU. Ekwesịrị ịgbakwunye na ọ bụ n'ezie njedebe ndọda nke Sun.
Oort Cloud n’ozuzu ya, bu kpakpando nile no na mbara igwe anyi, mbara ala ndi dwarf, meteorites, comets, na ihe ruru ijeri ijeri igwe ihe kariri 1,3km n’obosara. N’agbanyeghi na ha nwere onu ogugu di iche-iche nke elu-igwe, anya di n’etiti ha agha rue iri nde kilomita. Mkpokọta ya ga-enwe amabeghị, ma na-eme ihe approximation, -enwe ka a prototype Halley si Comet, E meela atụmatụ ya ihe dịka 3 × 10 ^ 25kg, ya bụ, ihe dịka ugboro 5 na mbara ụwa.
Mmetụta Tidal na Oort Cloud na ụwa
N'otu ụzọ ahụ Ọnwa na-akpa ike n'oké osimiri, na-ewelite ebili, a chọpụtala nke ahụ N'ụzọ dị ịtụnanya, ihe a na-eme. Oghere dị n’etiti otu ahụ na nke ọzọ na-ebelata ike ndọda nke otu na-emetụta nke ọzọ. Iji ghọta ihe ịtụnanya a ga-akọwa, anyị nwere ike ileba anya na ike ndọda Ọnwa na Anyanwụ na-akpa n’uwa. Dabere na ọnọdụ ebe ọnwa dị maka Sun na ụwa anyị, ebili mmiri nwere ike ịdị iche na ịdị ukwuu ha. Ijikọta na Anyanwụ na-emetụta ike ndọda dị na mbara ụwa anyị nke na-akọwa ihe kpatara ebili mmiri ji ebuli elu.
N'ihe banyere Oort Cloud, ka anyị kwuo na ọ na-anọchite anya oké osimiri nke ụwa anyị. NA Milky Way ga-anọchi anya ọnwa. Nke ahụ bụ mmetụta ebugharị. Ihe ọ na - emepụta, dịka nkọwa nkọwa ahụ, bụ nrụrụ gbagọrọ etiti nke ụyọkọ kpakpando anyị. N’iburu n’uche ike ndọda nke Anyanwụ pere mpe ka anyị ga - esi nweta ya, obere ike a ezuola imebi ngagharị nke ụfọdụ ihe dị n’eluigwe, na - eme ka ezighachi ha ihu Anyanwụ.
Usoro nke ikpochapu umu anumanu na mbara ala anyi
Otu ihe ndị sayensị chọpụtarala bụ na ọ bụ eziokwu bụla 26 nde afọ odika, e nwere otu usoro. Ọ bụ maka mkpochapu ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ụdị n'oge a. Ọ bụ ezie na enweghị ike ịkọwa ihe kpatara ihe ịtụnanya a. Mmetụta ebili mmiri nke Milky Way na igwe ojii Oort ọ nwere ike ịbụ nkwenye iji tụlee.
Ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na Sun na-agba ụyọkọ kpakpando, na gburugburu ya, ọ na-agabiga na "ụgbọelu galactic" na oge ụfọdụ, enwere ike ịkọwa usoro ikpochapu ndị a.
A gbakọọ na kwa afọ 20 ruo 25, Anyanwụ na-agabiga na mbara igwe dị na mbara igwe. Mgbe nke ahụ mere, ike ndọda nke ụgbọ elu galactic na-arụ ga-ezuru Oort Cloud niile. N'ịtụle na ọ ga-ama jijiji ma kpasasị ahụ ndị ahụ nọ n'ime igwe ojii. A ga-eme ka ọtụtụ n'ime ha laghachi Sun.
Ndị ọzọ na-enyocha mbara igwe na-eche na Anyanwụ adịla nso nke ụgbọ elu galactic a. Na echiche ha na-eweta bụ nke ahụ Nsogbu a nwere ike ịpụta site na gburugburu akụkụ nke ụyọkọ kpakpando. Ọ bụ eziokwu na enwere igwe ojii dị n’iru, kamakwa ha na-acha anụnụ anụnụ Refeyim. Ha bu kpakpando buru oke ibu ma nwe kwa ndu di nkpunkpu, ebe ha na-eri ngwa ngwa nuklia ha ngwa ngwa. Kwa afọ ole na ole ụfọdụ ndị dike na-acha anụnụ anụnụ na-agbawa agbawa, na-akpata supernovae. Nke ahụ ga-akọwa ike ịma jijiji nke ga-emetụta Oort Cloud.
Ka o sina dị, anyị agaghị enwe ike iji anya nkịtị chọpụta ya. Ma mbara ala anyị ka bụ aja aja enweghị nsọtụ. Site na ọnwa ruo na ụyọkọ kpakpando anyị, ha emetụtala site na mmalite ha, ndụ na ịdị adị nke ụwa anyị diri. Ọtụtụ ihe na-eme ugbu a, karịa ihe anyị nwere ike ịhụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Oort Cloud. Oke ala nke Igwe
Inwe ụmụaka pere mpe, n'etiti usoro kachasị dị irè iji lụso mgbanwe ihu igwe ọgụ